SERASERA, TENY MALAGASY: 19/02/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 19/02/11
19 Février 2011, 22:51pm
PR RAYMOND RANJEVA: « Tokony hody Ratsiraka sy Ravalo »
Anisan’ireo naneho ny heviny manoloana ny toe-draharaha politika eto amin’ny firenena ny Pr Raymond Ranjeva. « Mifanojo amin’ny hevitro ny tokony hiverenan’ny Filoha Ratsiraka sy Ravalomanana Marc mbola mialokaloka any ivelany », hoy izy tamin’ny tafa fohy nifanaovany tamin’ny mpanao gazety, omaly.
Tsy manana olana amin’ny fiverenan-dRavalomanana anio ity tompon’andraikitra ambony teo amin’ny fitsarana iraisam-pirenena ity. Nohamafisiny fa efa efa nisy fotoana nihaonany tamin’ny Filoha Ratsiraka tany Frantsa sy ny efa nihaonany tamin’ny Filoha Ravalomanana tatsy Afrika Atsimo. “Miombon-kevitra izy mirahalahy Filoha teo aloha ireo fa tokony hiverina hody eto Madagasikara hiantoka ny famahana ny olana vokatry ny … (Suivre le lien)
RAIAMANDRENY MIJORO: "Tsy ny fiavian-dRavalomanana no inona"
"Tsy ny fahatongavan-dRavalomanana na tsia no zava-dehibe, fa izay hialan’ny vahoaka haingana amin’ny krizy", hoy ny Raiamandreny Mijoro notarihin’ny filohany, Pasitera Ramino Paul, tamin’ny mpanao gazety teny Ampefiloha, omaly. Tsy olona iray na olom-bitsy no jerena, fa ny vahoaka 20 tapitrisa. Tsy atao takalon’aina amin’ny olona iray na Filoha taloha na ny ankehitriny ny vahoaka. Vonona hanelanelana sy hampihavana izy ireo raha misy fifandonana ny fodian-dRavalomanana.
Takian’izy ireo kosa ny fananganana alohan’ny faran’ny febroary ny governemanta iraisana, atao amin’ny fomba hentitra ny fijerena ny zava-misy isan-toerana amin’ny famindram-pahefan’ny minisitera amin’izany. Atomboka ny fanaovana fanadihadiana (audit) amin’ny sampandraharaha rehetra hijerena ny fitantanana teo aloha, mila manao ny governemanta iraisana sy ny Cst ary ny Ct tatitra ofisialy ara-potoana amin’ny vahoaka hisian’ny mangarahara.
Federasionin’ny mpiasampanjakana ambony: Mitaky fanarenana ny fitantanan-draharaham-panjakana
Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety tetsy Andrefanambohijanahary ny federasionin’ny sendikan’ny mpiasampanjakana ambony miisa 12 na ny « fédération des syndicats des grands corps de l’Etat », nitondra ny fomba fahitan’izy ireo ny toe-draharaham-pirenena indrindra fa ny mahakasika ny fitantanan-draharaham-panjakana. Nambaran’izy ireo tamin’izany àry fa « mitotongana sy mikorosy fahana ny fitantanan-draharaham-panjakana ka izany no antony nahatonga izao fiombonambe izao mba tsy ho mpiray tsikombakomba amin’ny tsy fahombiazana izy ireo ». Nomarihin’izy ireo fa tsy tombotsoan’ny mpiasampanjakana irery ihany no andraikitry ny sendika fa ny fanatsarana ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny.
Koa noho izany dia mangataka amin’ny mpanao politika ny federasionin’ny sendikan’ny mpiasampanjakana ambony mba hitady vahaolana matotra sy haingana ary tsy hampidirana ny resaka politika intsony ao anatin’ny fitantanan-draharaham-panjakana. Hoy indrindra izy ireo : « olana pôlitika no nisy teto Madagasikara tany am-boalohany ; tsy izany intsony anefa no misy amin’izao fotoana fa olana sy krizy eo amin’ny sehatra rehetra mihitsy. Koa manana adidy sy andraikitra ny mpiasampanjakana ambony manoloana ny fanomanana amin’ny fidirana amin’ny Repoblika faha-efatra. Tsy maintsy harenina aloha ny fitantanan-draharaham-panjakana mialohan’izany. Tsy misy afatsy ny fifidianana ihany no vahaolana ary … (Suivre le lien)
Monja Roindefo: « Tsy nohenoina momba ireo mpanao politika nigadra aho »
Nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly i Monja Roindefo. Isan’ny nitondrany fanazavana ny fanontanian’ny mpanao gazety momba ny ho fodian-dRavalomanana.
Nambarany fa misy lafin-javatra tokony ho fantatra mazava momba azy dia ny hoe “tokony ho any ivelany ve izy no manefa ny saziny?” Etsy ankilany koa dia tsy azo hamaivanina ny dingana hikatsahana vahaolana amin’ny krizy ankehitriny, hoy ihany izy.
Nampifandraisiny amin’ny satan’ireo mpanao politika nogadraina hatramin’ny 2002 no mankaty ny raharaha teo ka nilazan’i Monja Roindefo fa “misy tamin’ireo mpanao politika nohelohina taorian’ny 2002 no afaka niverina an-tanindrazana taty aoriana, ka moa ve ireny olona ireny efa nahazo famotsoran-keloka na famelan-tsazy mazava sa mbola naman’ny migadra nefa toa mandehandeha toa ny olona afaka rehetra?”
Nambaran’i Monja Roindefo omaly tamin’izany rehetra izany ny adihevitra nambarany tao anivon’ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra fony ny tenany mbola praiminisitra. Nangataka aho, hoy izy, mba homena sata manokana ireny mpanao politika nigadra ireny raha tsy mbola vonona hiroso amin’ny fanomezana famotsoran-keloka azy ireny isika mpitondra” Tamin’izany mantsy aho dia efa nampitandrina fa … (Suivre le lien)
ITY ILAY "NOTAM" NANAKANA NY TSY HODIAN'NY FILOHA RAVALOMANANA MIANAKAVY
(Hisaoranay manoka na an'i www.mydago.com/ manokana indrindra ireo sary eto ambany)
SARY FITSENANA NY FILOHA RAVALOMANANA TENY IVATO: